Ngubani uDon Gato, isilwanyana esithembekileyo seAuronplay | Amakati eNoti
Ngubani uDon Gato, isilwanyana esithembekileyo seAuronplay
Encarni Arcoya | | Iikati ezidumileyo
Ukuphulukana nesilwanyana sasekhaya, xa ukunye naso kangangeentsuku, iiveki, iinyanga okanye iminyaka eliqela, yimeko elusizi ebangela ukuba bonke abathandi bezilwanyana banciphe. Kwaye kule meko, xa la mabali esiya kwintsholongwane, nangakumbi. I-Auronplay yabhengeza ngo-Epreli 26, 2021 ukuba isilwanyana sakhe esithembekileyo, uDon Gato, wasweleka ngenxa yokugula.
"Ndixhelekile kwaye kwangaxeshanye ndizele ngumsindo nomsindo", yayingamagama awapapashwa ngu-youtuber ku-Twitter malunga nokusweleka komfazi wakhe. Kodwa wayengubani uDon Gato? Ukuhlangana phakathi kweAuronplay kunye nekati yakhe kwakunjani? Siza kukuxelela ngoko.
1 Ngubani uDon Gato
2 Babunjani ubomi besilwanyana sasekhaya seAuronplay
Ngubani uDon Gato
UDon Gato wayeyikati emnyama enamehlo aluhlaza. Wayeneminyaka eyi-8 kwaye wayeyi-mascot ye-Auronplay. Kunye neRomany, enye yezilwanyana zasekhaya, banenkwenkwezi kwiividiyo zakhe zokusasaza amaxesha ngamaxesha, nokuba bangena endleleni, okanye benze ukuba i-youtuber ithathe inxaxheba.
Ke, abalandeli babesazi ukuba le feline yayihlala njani ne-youtuber, kwaye babonwabile njani abo babesekhaya eAndorra.
UDon Gato weza ebomini bakhe ngoNovemba 2013. Ifoto yakhe yokuqala, kwi-Instagram, yapapashwa ngo-Disemba 7, 2013, ngelixa wayesemncinci kakhulu. Ngapha koko, iikhamera kunye naye bezisoloko zinxulumene ngokusondeleyo. Kwaye wabelana naye ngevidiyo ebonisa apho abalandeli bakhe babekhona kwisilo-qabane sakhe esitsha, ikati encinci ephantse yalunga entendeni yesandla sakhe, emnyama, edlalayo kodwa enesineke kakhulu njengoko wayenayo ezingalweni.
Ngaba ukhe wabuza iAuronplay ukuba ebeya kwenza ntoni ukuba uDon Gato ubalekile kwaye uphendule wathi: Masithembe ukuba ayisoze yenzeke loo nto. Kodwa ukuba oku kuyenzeka ndiza kuwela kuxinzelelo. Ndingakhala kangangeenyanga ezintathu. Andazi ukuba ungasithanda njani isilwanyana kangaka.
Ngokufanayo, kuye kwafuneka ajongane nomnye umbuzo onzima: Kuza kwenzeka ntoni ukuba uDon Gato usweleke? «Ngomhla wokufa kwekati yam, nam ndiyafa. Kuphela ngabo kuthi banezilwanyana zasekhaya abazi iintlungu ezinokubangelwa kukufa kwesilwanyana sasekhaya.
Babunjani ubomi besilwanyana sasekhaya seAuronplay
UDon Gato wayengomnye wabahlobo "abaphambili" baka-Auroplay. Ngapha koko, uninzi luluvo lokuba Itshintshe ubomi be-youtuber kwaye i-feline ibiyinkwenkwezi kwiividiyo zayo ezininzi. Ngapha koko, kwiYouTube sinokufumana ezinye iividiyo apho iAuronplay yadlala naye, okanye iiAdventures zikaDon Gato, ividiyo awayekuyo umntu ophikisayo.
Wahlala ecaleni kwakhe, kunye ne-Roma, enye yezilwanyana zasekhaya i-youtuber enayo kwaye ihlala igcinwe kakuhle, njengomthandi wezilwanyana olungileyo. Ubumbona ukuba umthanda kakhulu kwaye uhlala esecaleni kwakhe, ngakumbi xa emfuna.
Ewe, ngamagama ka-Auronplay ngokwakhe, ikati yayifunde "ukudlula kuye" kwaye ingamhoyi, kodwa sele siyazi ukuba kuma-feline athetha okungaphezulu kunamagama nakwiividiyo ungabona ukuba bekwazi kanjani ukunxibelelana ngabo.
Usuku losuku lukaDon Gato wayekuthanda ukuhlamba ilanga, ulala kancinci kwaye wayengathandi ukuphuma phandle. Ngaphandle kwezinto zokudlala ezininzi, ukukrwela, njl. into eqhelekileyo kukuba wayehlala ekufutshane neAuronplay, nokuba ecaleni kwakhe okanye ngaphezulu kwakhe, uphawu lothando awayenalo.
Zininzi izihlandlo ezihlekisayo phakathi kukaDon Gato kunye neAuronplay. Uhleli eyinxalenye yeevidiyo, nangaphandle kokufuna, kuba ukwazile ukungena kuzo engakhange amenywe, kodwa enomdla kubalandeli, abaza kumbona njengomnye ophambili kwaye bambuza ukuba abambonanga nini.
Ngelishwa, kwaye nangona uDon Gato wayengenguye "umzala" kakhulu, kuba wayeneminyaka esi-8 kuphela, ukugula kwabangela ukuba angeniswe kwisibhedlele sezilwanyana eAndorra kwaye, ekugqibeleni, ayinakoyisa umfanekiso womxhuzulane.
Sithumela lonke ukhuthazo lwethu kwi-Auronplay ngexesha elinzima nelibuhlungu ngolu hlobo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Iikati ezidumileyo » Ngubani uDon Gato, isilwanyana esithembekileyo seAuronplay
Kutheni iikati zingakwazi ukutya itshokholethi?